မုန်တိုင်းသတင်း « MMWeather Information BLOG
အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာတောင်ပိုင်းမှ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း SEVEN
အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာ တောင်ဘက်ခြမ်း Madagascar ကျွန်းအရှေ့ဘက် မိုင် ၁၂၀၀ ခန့်၊ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ ကိုလံဘိုမြို့ရဲ့ အနောက်တောင်ဘက် ၁၆၇၅ မိုင်ခန့်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ အပူပိုင်းမုန်တိုင်း 07S(SEVEN) ဟာ ပိုအားကောင်းလာပြီး ၂၄ နာရီအတွင်း (မြန်မာစံတော်ချိန် – ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက် နံနက် ၆ နာရီခွဲ မှာ) အဆင့်-၁ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း အဆင့်ကို ရောက်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်၊
SEVEN ဟာ ပင်လယ်ပြင်မှာ ဆက်လက်တည်ရှိပြီး ၃၆ နာရီအတွင်းမှာ အဆင့်-၂ ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်း အဆင့်အထိ ရောက်ရှိပြီးမှ ပြန်လည်အားပျော့ကာ တောင်ဘက်ကို ဆက်လက် ရွေ့လျားသွားမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
Tropical Cyclone 07S SEVEN 19 . . . → Read More: အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာတောင်ပိုင်းမှ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း SEVEN
Leaveacomment မုန်တိုင်းသတင်း 07S, SEVEN, SOUTH INDIAN OCEAN, မုန်တိုင်းသတင်း, အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာတောင်ပိုင်း တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှ – လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 26W ဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲ
By mmweather.ygn, on December 13th, 2011%
တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာသည့် 26W(TWENTYSIX) သည်
ဗီယက်နန်နိုင်ငံ ဟိုချီမင်းစီးတီး၏ အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၃၈၀ ခန့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဖနွမ်းပင်မြို့တော် အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၅၀၀ ခန့် ဘရူနိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ဒါဆရီဘာဂဝန်မြို့တော်၏ မြောက်-အနောက်မြောက်ဘက် ၃၃၅ မိုင်ခန့် တွင်ဆက်လက်တည်ရှိနေပြီး လွန်ခဲ့သော ၆ နာရီအတွင်းက တောင်ဘက်သို့ တစ်နာရီ ၈ မိုင်နှုန်းခန့်ဖြင့် ရွေ့လျားခဲ့ကြောင်း ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၆ နာရီခွဲတွင် ရရှိသည့် NRL data များအရ သိရှိရပါသည်။
26W TWENTYSIX – 13 Dec 2011 0000Z Location: 8.8 111.9 Winds: . . . → Read More: တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှ – လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 26W ဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲ
2 comments မုန်တိုင်းသတင်း 26W, 94W, TWENTYSIX, မုန်တိုင်းသတင်း, တောင်တရုတ်ပင်လယ်, လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှ – လေဖိအားနည်းဆဲလ် 94W မုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်လာတော့မည် – ၄
By mmweather.ygn, on December 12th, 2011%
တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင် ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန်နေ့လည် ၁၂၃၀ နာရီတွင် စတင်ဖြစ်ပေါ်နေသည့် လေဖိအားနည်းဆဲလ် 94w သည် အားပိုကောင်းလာပြီး လာမည့် ၂၄ နာရီအတွင်း မုန်တိုင်းငယ်အဖြစ်သို့ ရောက်လာနိုင်ခြေ HIGH အဆင့်သို့ရောက်လာကြောင်း JTWC မှ သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်ထားဆဲ ဖြစ်ပါသည်။
လေဖိအားနည်းရပ်ဆဲလ် 94W သည် ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၆နာရီခွဲအချိန်တွင် –
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့တော် အနောက်တောင်ဘက် မိုင် ၅၄၀ ခန့်၊ ဘရူနိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ဒါဆရီဘါဂါဝန်မြို့တော် မြောက်ဘက် ၃၂၅ မိုင်ခန့်၊ ဗီယက်နန်နိုင်ငံ ဟိုချီမင်းစီးတီး အရှေ့ဘက် ၅၄၈ မိုင်ခန့်နှင့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဖနွမ်းပင်မြို့တော် အရှေ့-အရှေ့မြောက်ဘက် မိုင် . . . → Read More: တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှ – လေဖိအားနည်းဆဲလ် 94W မုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်လာတော့မည် – ၄
One comment မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ 94W, မုန်တိုင်းသတင်း, မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ, တောင်တရုတ်ပင်လယ်, လေဖိအားနည်းဆဲလ် - LPC တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှ – လေဖိအားနည်းဆဲလ် 94W မုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်လာတော့မည် – ၃
By mmweather.ygn, on December 11th, 2011%
ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၆ နာရီခွဲတွင် ရရှိသည့် NRL data များတွင် လေဖိအားနည်းဆဲလ်သည် အရှေ့မြောက်ဘက်မှ လေအေးစီးကြောင်းများကြောင့် တောင်ဘက်သို့ လွန်ခဲ့သည့် ၆ နာရီအတွင်း တစ်နာရီလျှင် ၈ မိုင်နှုန်းခန့်ဖြင့် ရွေ့လျားခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
လေဖိအားနည်းရပ်ဆဲလ် 94W သည် ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ ရက် . . . → Read More: တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှ – လေဖိအားနည်းဆဲလ် 94W မုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်လာတော့မည် – ၃
One comment မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ 94W, မုန်တိုင်းသတင်း, မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ, တောင်တရုတ်ပင်လယ်, လေဖိအားနည်းဆဲလ် - LPC တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှ – လေဖိအားနည်းဆဲလ် 94W မုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်လာတော့မည် -၂
By mmweather.ygn, on December 10th, 2011%
တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင် ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန်နေ့လည် ၁၂၃၀ နာရီတွင် စတင်ဖြစ်ပေါ်နေသည့် လေဖိအားနည်းဆဲလ် 94w သည် အားပိုကောင်းလာပြီး လာမည့် ၂၄ နာရီအတွင်း မုန်တိုင်းငယ်အဖြစ်သို့ ရောက်လာနိုင်ခြေ HIGH အဆင့်သို့ရောက်လာကြောင်း JTWC မှ သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။
လေဖိအားနည်းရပ်ဆဲလ် 94W သည် ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၆နာရီခွဲအချိန် NRL data များအရ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့တော် အနောက်တောင်ဘက် မိုင် ၄၃၀ ခန့်၊ ဘရူနိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ဒါဆရီဘါဂါဝန်မြို့တော် မြောက်ဘက် ၄၁၅ မိုင်ခန့်၊ ဗီယက်နန်နိုင်ငံ ဟိုချီမင်းစီးတီး အရှေ့ဘက် ၆၁၅ မိုင်ခန့်ရှိ တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင် ဗဟိုပြုတည်ရှိနေပြီး၊ . . . → Read More: တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှ – လေဖိအားနည်းဆဲလ် 94W မုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်လာတော့မည် -၂
Leaveacomment မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ 94W, မုန်တိုင်းသတင်း, မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ, တောင်တရုတ်ပင်လယ်, လေဖိအားနည်းဆဲလ် - LPC တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှ 93W အခြေအနေ
By mmweather.ygn, on December 5th, 2011%
တောင်တရုတ်ပင်လယ်တောင်ပိုင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်နေခဲ့တဲ့ လေဖိအားနည်းဆဲလ် 93W ဟာ ဒီဇင်ဘာလ ၄ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၆နာရီခွဲ နောက်ပိုင်းမှာ တဖြည်းဖြည်း အားကောင်းလာပြီး – လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 25W(TWENTYFIVE) အဆင့်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၆ နာရီခွဲ အချိန်မှာရတဲ့ NRL data တွေအရ ဗဟိုဖိအား ထပ်ကျဆင်းလာပြီး အင်အားကောင်းလာခဲ့ကာ မုန်တိုင်းငယ် အဖြစ်ကို ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့မနက်ပိုင်းက data တွေ အရ မုန်တိုင်းငယ် 25W ဟာ ဗီယက်နန်နိုင်ငံ Khanh Hoa ပြည်နယ် Nha Trang မြို့ရဲ့ အရှေ့ဘက် မိုင် ၉၀ ခန့် ၊ . . . → Read More: တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှ 93W အခြေအနေ
Leaveacomment မုန်တိုင်းသတင်း 25W, 93W, TWENTYFIVE, မုန်တိုင်းသတင်း, တောင်တရုတ်ပင်လယ် 02B ဝင်ရောက်ပြီး မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ
One comment မုန်တိုင်းလွန်ကာလ 02B, 94B, TWO, မိုးရွာသွန်းခဲ့သည့် အခြေအနေ, မုန်တိုင်းလွန်ကာလ, မုန်တိုင်းသတင်း အပူပိုင်းမုန်တိုင်း 02B ကုန်းတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ပြီးဖြစ်
By mmweather.ygn, on October 19th, 2011%
ကုန်းတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လုနီးအချိန်မှ ကပ်၍ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမည် 02B(TWO) ဟု အမည်ရသွားသော ယခင် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 94B သည် စစ်တွေမြောက်ဘက် ၈၅ မိုင်ခန့် အကွာရှိ မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်စပ်မြို့ TUMBRU အပေါ်မှဖြတ်၍ ကုန်းတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ကုန်းတွင်းသို့ဝင်ရောက်ခြင်း မတိုင်မီနာရီ အတော်များများကပင် မုန်တိုင်း အဖျားပိုင်းသည် ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဒေသများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အထက်ပိုင်းဒေသ အချို့တို့သို့ လေပြင်းများတိုက်ခတ်မှုဖြင့် စတင်ခဲ့ပြီး မိုးသည်းထန်ခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
အောက်ပုံတွင် တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်း မုန်တိုင်းဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်စဉ်က မုန်တိုင်း၏ လားရာအတိုင်း တိုင်းတာရရှိသည့် အရွယ်အစားမှာ အချင်း ၅၁၄ မိုင်ရှိပါသည်။ မုန်တိုင်း ကုန်းတွင်းသို့ လုံးလုံးလျားလျားဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ပြီးသည်အထိ မုန်တိုင်း အကြွင်းအကျန်များသည် မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းဒေများနှင့် ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဒေများ၊ အထူးသဖြင့် စစ်တွေ၊ . . . → Read More: အပူပိုင်းမုန်တိုင်း 02B ကုန်းတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ပြီးဖြစ်
One comment မုန်တိုင်းသတင်း 02B, 94B, TWO, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်, မုန်တိုင်းသတင်း လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 94B ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းသို့ ဦးတည်ရွေ့လျားလျှက်ရှိ
လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 94B သည် ပိုမိုအားကောင်းလာနေပြီး လာမည့် ၁၂ နာရီမှ ၂၄ နာရီအတွင်း မုန်တိုင်းအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိနိုင်ခြေ HIGH သို့ အဆင့်မြှင့်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း JTWC မှ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖေါ်ပြထားပါသည် – လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 94B ၏ မြန်မာစံတော်ချိန် အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက် ည သန်းခေါင်(မြန်မာစံတော်ချိန် ဝဝး၃ဝ နာရီ)အချိန် ရရှိသည့် NRL နှင့် JTWC data များတွင် ဗဟိုဖိအား 1003 hPa သို့ ကျဆင်းလျှက်ရှိပြီး စစ်တွေမြို့၏ အနောက်ဘက် မိုင် ၁၉ဝ ခန့်၊ ကျောက်ဖြူမြို့၏ အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက် မိုင် ၂၃ဝ ကျော်ခန့် အကွာမှ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အရှေ့မြောက်ပိုင်း(စစ်တွေမြို့ဆီသို့) . . . → Read More: လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 94B ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းသို့ ဦးတည်ရွေ့လျားလျှက်ရှိ
One comment မုန်တိုင်းသတင်း, မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ 94B, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်, မုန်တိုင်းသတင်း, မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ, လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်မှ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ဆက်လက်တည်ရှိနေ
By mmweather.ygn, on October 18th, 2011%
ဒီနေ့ အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၈ နာရီခွဲမှာ NRL က တင်ထားတဲ့ ဂြိုလ်တုဓါတ်ပုံမှာ မနေ့က – ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင် မြောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 94B ဟာ ဆက်ပြီး ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒီနေ့ မနက် ၆ နာရီခွဲ မှာ ရတဲ့ NRL data တွေအရ လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်း 94B ဟာ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အနောက်မြောက်ပိုင်းကို ရွေ့လျားသွားခဲ့ပြီး၊ ရန်ကုန်မြို့ အနောက်ဘက် ၅၁၅ မိုင်ခန့်၊ ပုသိမ်မြို့ အနောက်ဘက် မိုင် ၄၂ဝ ခန့်၊ စစ်တွေမြို့ အနောက်တောင်ဘက် မိုင် ၃၅ဝ ခန့်မှာ ဗဟို ပြုနေပြီး၊ . . . → Read More: မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်မှ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ဆက်လက်တည်ရှိနေ
One comment မုန်တိုင်းသတင်း, မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ 94B, ကပ္ပလီပင်လယ်, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်, မုန်တိုင်းသတင်း, မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ, လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း Older Entries »